Dr. Maxamed Jaamac Salaad Oo Maanta Lagu Aasay Magaalada Gaalkacyo | Faafan News
Dr. Maxamed Jaamac Salaad Oo Maanta Lagu Aasay Magaalada Gaalkacyo
Alle ha u naxariistee waxaa maanta Magaaladda Galkacayo lagu aasay marxuum dr Maxamed Jaamac Salaad, oo ahaa dhakhtar ku takhakhusya cudurada neerfaha, muddo dheerna ka shaqaynayay dalka gudihiisa iyo dibadiisa.
Aaska dhakhtarka waxaa ka qaybgalay Mas’uuliyiin ka socday Dowladda Federaalka, dowladda Puntland, siyaasiyiin, maamulka gobolka mudug, dhakhaatiir Soomaaliyeed iyo kuwa u dhashay dalka Talyaaniga, Isimo iyo shacab ka kala yimid deegaanada Puntland iyo guud ahaan soomaaliya.
Wasiirka Caafimaadka Puntland, Dr cabdinaasir cismaan , Xildhibaan xuubsireed oo ku hadlayay afka dowladda federaalka iyo Siyaasiyi Cali Cabdi Awaare ayaa sidoo ka hadlay aaska marxuumka ayaa u tacsiyeeyay qoyska, qaraabada iyo ummada soomaaliyeed ee uu ka baxay Dr Maxamed jaamac, waxayna dhammaantood ka sheekeeyeen gargaarkii iyo adeegyadii uu marxuumka u fidin jiray bukaanada,waxaana ay Alle uga baryeen in uu ka waraabiyo janadii Fardowso ahayd, ehelka uu Alle ka siiyo samir iyo iimaan.
Alle h au naxariistee, Dr Maxamed Jaamac wuxuu , tan iyo markii ay burburtay dowladda dhexe ee Soomaaliya ka howlgali jiray Magaaladda Galkacayo, halkaasi oo uu ka asaasay Cusbitaal weyn oo lagu daaweeyo dadka bukaanka. alle ha u naxariistee dr Maxmamed oo la keenay maydkiisa magaaladda galkacayo oo lagu aasay maanta, wuxuu ku geeriyooda dalka talyaaniga